HESHIIS DHAN: Arsenal Oo Qarka U Saaran Saxeexeedii Labaad Ee Suuqa Xagaagan & Arteta Oo U Muuqda Mid Aan Kaftamayn - Gool24.Net
HESHIIS DHAN: Arsenal Oo Qarka U Saaran Saxeexeedii Labaad Ee Suuqa Xagaagan & Arteta Oo U Muuqda Mid Aan Kaftamayn
Arsenal ayaa lagu soo warramayaa inay ku guuleysatay saxeexa daafaca dhexe ee kooxda Lille ee Gabriel Magalhaes iyagoo ku garaacay kooxda ay Premier League ku xifaaltamaan ee Manchester United iyo kooxda ree Talyaani ee Napoli.
Daafaca ree Brazil oo 22 Milyan oo Pound lagu qiimeeyo ayay suuqa xagaagan kooxo badan oo waaweyni isha ku hayeen kaddib xilli ciyaareed wanaagsan oo uu kusoo qaatay horyaalka Ligue 1.
Magalhaes ayaa 23 kulan oo horyaalka Ligue 1 ah ugu soo bilawday Lille isaga oo kasoo caawiyay inay booska afraad kaga dhammaystaan kala sarreynta kahor intii aan gabi ahaanba horyaalkaas loo kansalin sababta xanuunka Korona.
Arsenal ayaa suuqa xagaagan xooga saaraysay daafaca kooxdeeda kaddib markii ay booska siddeedaad kaga dhammaysteen miiska kala sarreynta Premier League iyadoo 48 gool laga soo dhaliyay, Gabriel Magalhaes ayaa ka caawin kara inay xoojiyaan.
Arsenal ayaa horeba xidhiidho ula soo samaysay Lille maadaama oo ay sanadkii hore heshiis 72 Milyan oo Pound ah kagala soo wareegeen Nicolas Pepe waxaana ay ka faa’idaysteen xidhiidhka kasoo dhaxeeyay kooxdaas.
Gabriel ayaa daafaca dhexe ee Arsenal kula midoobi kara daafac kale oo dhalin yar ah waana William Saliba oo ah 19 sano jir ay sanadkii hore Gunners la wareegeen balse xilli ciyaareed amaah ah kusoo joogay kooxdii iibisay ee St Etienne.
Man United ayaa sidoo kale ahayd koox mudooyinkii ugu dambeeyay lala xidhiidhinayay Gabriel walow il-wareedka Manchester Evening News uu sheegay in wararkaasi ay ahaayeen kuwo samays ah oo aan marnaba Gabriel laga doonayn Old Trafford.